အောင်ဘာလေထီလက်မှတ်များ ဈေးတင်ရောင်းချနေမှုကို အစိုးရမှ ထိရောက်စွာအရေးယူနိုင်မှုမရှိသေးခြ - Yangon Media Group
အောင်ဘာလေထီလက်မှတ်များ ဈေးတင်ရောင်းချနေမှုကို အစိုးရမှ ထိရောက်စွာအရေးယူနိုင်မှုမရှိသေးခြ
အောင်ဘာလေထီလက်မှတ်များ ဈေးတင် ရောင်းချနေမှုကို အစိုးရမှထိရောက်စွာ အရေးယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးခြင်းသည် ထီရောင်းချသူများကိုကြိုက် ဈေးဖြင့် ဈေးတင်ရောင်းချခွင့်ပေး နေသကဲ့သို့ ထီကံစမ်းသူများအတွက်လည်း ဈေးကြီးပေး ဝယ်ယူ နေရသည့် နစ်နာမှုများဖြစ်ပေါ်စေ ကြောင်း ထီဝါသနာရှင်အချို့က ဝေဖန်ပြောဆိုလျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ လက်ရှိထီလက်လီဈေးကွက် အတွင်း ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ကံထူးနိုင်သည့် ကျပ် ၅ဝဝ တန်ထီလက်မှတ်များ ကိုတွဲ၍ကျသင့်ဈေးနှုန်းထက်ဈေး တင်ရောင်းချမှု၊ ကျပ်သိန်းနှစ် သောင်းခွဲကျပ်ကံထူးနိုင်သည်ဟု ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်စေသည့် ကြေညာရောင်းချမှုများကိုအစိုးရအနေဖြင့်စိစစ်ခြင်း၊ သတိပေးခြင်းများသာ ပြုလုပ်နိုင် ပြီး ထိရောက်စွာ အရေးယူနိုင်ခြင်း မရှိသေး ကြောင်း သိရသည်။
သန်လျင်မြို့နေ ထီဝါသနာရှင် ကိုခင်ဇော်က ”လူတစ်ယောက် ဘဝပြောင်းလဲဖို့ ထီကမမြင်ရတဲ့ကံ တစ်ခုလိုဖြစ်နေတော့ ထီကိုအမြဲ ထိုးဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်ထီပေါ်လာလာ သတ်မှတ်ဈေးအတိုင်း ဝယ်လို့ရတာ နည်းတယ်။ ကျပ် ၅ဝဝ တန် ထီတုန်းကလည်း စစချင်းတစ်လ၊ နှစ်လသာ ကျပ် ၅ဝဝ နဲ့ ထိုးလို့ရပေမယ့် နောက်ပိုင်းတစ်စောင် ကျပ် ၆၅ဝ ဖြစ် သွားတယ်။ အမြင့်ဆုံးကျပ် ၈ဝဝ အထိ ပေးဝယ်ခဲ့ရတာလည်းရှိတယ်။ အခုကျပ် ၁ဝဝဝ တန်ထီမှာ တစ်စောင်တစ် ထောင်နဲ့ ထိုးလို့ရပေမယ့် ဈေးမြှင့် ရောင်းတာကရှိသေးတယ်။ အစ်ကို ကတော့ ဈေးမှန်နဲ့ထိုးခဲ့တယ်။ ဖြစ် တာက အမေ့မှာပါ။ လူကြီးဆိုတော့ ထီထိုးချင်တာနဲ့ ဘယ်လောက်ဈေး ကွာတယ်ဆိုတာမတွက်ဘဲ ထိုးချလာတာ။ ကျပ် ၁ဝဝဝ တန် ထီကိုးစောင် နဲ့ ကျပ် ၅ဝဝ တန် ထီတစ်စောင်က ၉၅ဝဝ ပဲကျရမှာကို တစ်သောင်းကျော် ပေးထိုးလာတာ။ မြို့မှာတောင် ဒီလို အခြေအနေရှိတော့ဝေးတဲ့ နယ်တွေ မသိနားမလည်တဲ့သူတွေ ဘယ် လောက်အထိ ဈေးမြှင့်ရောင်းခံ နေရမလဲဆိုတာ မပြောတော့ဘူး။ ကျပ် ၂ဝဝ တန်ထီလည်း ဈေးကြီးပေး ဝယ်ရတယ်။ ကျပ် ၅ဝဝ တန်ထီလည်း ထိုနည်းတူပဲ။ အခု ကျပ် ၁ဝဝဝ တန်ထီ မှာလည်း ဈေးမြှင့်ရောင်းတာတွေ ရှိလာတယ်။ ဒါကိုအစိုးရကထိထိ ရောက်ရောက် မတားနိုင်သေးဘူး။ မတားနိုင်လို့လည်း ထီရောင်းတဲ့သူ တွေ ရောင်းချင်သလိုရောင်း၊ ဝယ် တဲ့သူတွေကလည်း ဈေးကြီးပေး ဝယ်နေရတာတွေ ဖြစ်နေတာပေါ့”ဟု ပြောသည်။
စားသုံးသူများအနေဖြင့် ထီလက်မှတ်အား မူရင်းဈေးထက် ဈေး မြင့်ပေးဝယ်ယူမှုမရှိစေရေး၊ လွယ်ကူစွာဝယ်ယူနိုင်ရေး၊ လိမ်လည်ခံ ရမှုမရှိစေရေး၊ ထီလုပ်ငန်းရှင် တစ်ချို့က လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုမရှိစေရေး တို့အတွက် လက်ရှိထီဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေသည့်စနစ်အား ပြန်လည်စိ စစ်သုံးသပ်ရန် လိုအပ်နေကြောင်း အကြံပြုပြောဆိုမှုများလည်း ရှိ ကြောင်း သိရသည်။
ထီလက်လီရောင်းချသူ ကိုစည်သူက ”ထီဈေးကတော့ တစ်ဆိုင် နဲ့တစ်ဆိုင်မတူဘူး။ လက်ကားဝယ်ယူရတဲ့ ဈေးကွက်မှာကိုက ကွာ တယ်။ အခုလမှာဆိုရင် အစ်ကို ဝယ်ရောင်းရတာ ထီတစ်စောင်ဈေး နှုန်းက ကျပ် ၉ဝဝ စွန်းစွန်းရှိတယ်။ မိုးယံကတော့ ဈေးကြီးတယ်။ တစ် စောင်ကို ကျပ် ၉၅ဝ စွန်းစွန်းပေးဝယ် ရတယ်။ ဒီဈေးနှုန်းနဲ့ဆိုတော့ တစ် စောင်ကို ကျပ် ၁ဝဝဝ နဲ့ရောင်းချနိုင် တယ်။ လက်လီဈေးကွက်မှာလည်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ရောင်းတဲ့ဈေးကွာတယ်။ ကုန်ကျစရိတ် ပေါ်မူတည်ပြီး ဈေးတင်ရောင်းကြ တာတွေရှိတယ်။ ထီကိုသတ်မှတ် ဈေးအတိုင်း ရောင်းဖို့ဆိုတာ အစ် ကိုကတော့ ဘယ်လိုလုပ်ပါလို့ အ ကြံမပေးတက်ပေမယ့် အခုလက်ရှိ အစိုးရရဲ့ ထီဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့စ နစ်ကို ပြန်စဉ်းစားသုံးသပ်သင့်တယ် လို့ ထင်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
ထီရောင်းချမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အခြေအနေအကြောင်းကြောင့် အဆင့်ဆင့်ရောင်းချသူများရှိပြီး အဆင့်ဆင့်တွင် သတ်မှတ်ဈေး နှုန်းထက် ဈေးကြီးမြှင့် ရောင်း ချမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါက သက်ဆိုင်ရာ ထီဆိုင်ကြီးအနေဖြင့် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ရမည်ဟု မှာကြားထား သော်လည်း ဥပဒေမရှိခြင်းကြောင့် အရေးယူမှုပိုင်းတွင် အားနည်းနေ ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးကျော်သန့် လွင်က ”အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲအနေနဲ့က လက်ရှိမှာ ထီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဥပဒေမရှိဘူး။ ဥပဒေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် ညွှန်ကြားချက်နဲ့ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ထီဈေးကွက်ရဲ့ သဘောတရားသည် လက်ရှိမှာ အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာန ခွဲအနေနဲ့ လက်လီဈေးကွက်နဲ့ လက် ပွေ့ဈေးကွက်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ အဓိကဝယ်ယူရောင်း ချတဲ့ လက်ကားကိုသာ ထိန်းချုပ် နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် လက် လီ၊ လက်ပွေ့တွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်တာသည် အဓိကလက်ကား တိုက် ရိုက်ဝယ်ယူသူက တစ်ဆင့်ထိန်းချုပ် လို့ရတဲ့ အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ထီဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှု မရှိစေရေးအတွက် လက်ကားဖြန့် ဖြူးသူ ထီလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း အား လစဉ်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ခေါ်ယူပြီး တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူရောင်းချ သူများအနေဖြင့် ထီလက်မှတ်များ ကို သတ်မှတ်ဈေးနှုန်းအတိုင်း ရောင်းချရန်၊ မိမိထီဆိုင်အမည်ဖြင့် ထပ်ဆင့်ရောင်းချသော ဆိုင်များကို ဈေးနှုန်းမြင့်မားမှုမရှိစေရေးညှိနှိုင်း ကြပ်မတ်ရန်၊ ပင်ရင်းထီဆိုင်များ မှ သတ်မှတ်ဈေးနှုန်းဖြင့် ရောင်းချ သောထီအရောင်းကားများနှင့် လူ စည်ကားရာနေရာများတွင်ရောင်း ချပေးရန်တို့ကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန မှညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမင်းထွဋ်က ”ဈေးတင်ရောင်းတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လက်ကားဒိုင်ကြီးတွေ၊လက် ခွဲဒိုင်တွေကို လိုက်စစ်တဲ့အခါမှာ တော့ မတွေ့ဘူး။ လက်ပွေ့ရောင်းချသူတွေ၊ ဆိုင်အသေးလေးတွေက ဖြစ်သွားတယ်လို့ ထင်ရတယ်။ ဒါကိုတော့စစ်နေတယ်။ ထီရောင်း ချတဲ့သူတွေကို လစဉ်ပုံမှန်တွေ့ဆုံ ပြီး ဈေးတင်မရောင်းဖို့ ညွှန်ကြား ထားတာရှိတယ်။ အကယ်၍ ဈေးတင်ရောင်းတယ်လို့ တွေ့ရှိခဲ့ရင် သူတို့ကို ပေးထားတဲ့ ခွဲတမ်းဖြတ်တာ သူတို့တင်ထားတဲ့ deposit သိမ်းတာတွေ လုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။ မိုးယံကကျပ်သိန်းနှစ်သောင်း ခွဲကံထူးနိုင်မယ့် ပုံစံနဲ့ရောင်းချနေ တဲ့အပေါ်မှာလည်း ပြန်စိစစ်ခိုင်းထားပါတယ်”ဟု ပြောသည်။ အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲသည် ထီလက်မှတ်ရောင်းရငွေ ၏ ၆ဝ ရာခိုင်နှုန်းကို ဆုကြေးအဖြစ် ခွဲဝေဖွင့်လှစ်ပေးလျက်ရှိပြီး ကျန် ၄ဝ ရာခိုင်နှုန်းကို နိုင်ငံတော်၏ဖွံ့ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် အခွန်ဘဏ္ဍာအဖြစ်ရယူလျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
မြရည်နန္ဒာ တန်ဖိုးမျှတ တိုက်ခန်းများကို အာမခံကြေး ကျပ်ငါးသိန်းပေးသွင်းပြီးမှသာ အခန်းအတွက် မဲနှိုက်ခွင့်ပြုမည်
Vietjet ​လေ​ကြောင်းလိုင်းမှ ဘာလီကျွန်းသို့ခရီးစဉ်အသစ် တိုးချဲ့​​ပြေးဆွဲသည့် အထိမ်းအမှတ်အနေ?
အမှတ်ပေးဇယားထိပ်ဆုံးတွင် ရှိနေသော်လည်း အကြိုဗိုလ်လုပွဲစဉ်အကြောင်း မစဉ်းစားချင်သေးဘူးဟု ??
ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင် အထက်တန်းကျောင်း၌ သေနတ် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်